Gbasara Anyị - Jiangsu Senwei Eletrọniki Co., Ltd.
Jiangsu Senwei Eletrọnik Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka njikwa ike zuru oke nke nwere njikwa ike dị ka azụmaahịa ya, na-enye ọrụ nkwụsị dịka ngwa eji atụ, ngwa nkwukọrịta, ngwanrọ igwe ojii, ntinye usoro, mmemme sistemu na mmezi metụtara ike. ntụle na njikwa.
Companylọ ọrụ ahụ na-eme sọlfọ smart, eriri ọkụ na-echekwa, eriri ọkụ, igwe eletriki elekere elekere elekere elekere elekere elekere elekere eletrik elekere eletriki elekere eletriki elekere eletriki elekere eletriki elekere eletriki eletriki eletriki elektrọnik elekere elekere , ngwa igwe dijitalụ nke arụmọrụ, mita mmiri, ọdụ ụgbọ mmiri, DTU, RTU, igwe njikwa na ntinye maka nchịkọta ozi eletrik, yana usoro ọrụ aka nke ngwaahịa ndị a dị n'elu.
Companylọ ọrụ ahụ nwere otu azụ nwata, nke aka ọrụ, na azụ azụ nke teknuzu dị elu yana njikwa azụ azụ. Studylọ ọrụ ahụ bụ ọgbakọ na-ahụ maka ọmụmụ ihe na-akwado mmụta na ọrụ, na-arụ ọrụ na mmụta, na na-ekwusi ike obere mmezi kwa ụbọchị.
Innovation bu ochicho ebighebi nke ndi nzoputa, ya na ihe omuma nke teknụzụ maka mmepe, ihe njikwa maka abamuru ya, nhazi ọrụ, ịkọwapụta, echiche nchịkwa mmemme mgbe niile n’ichepụta ngwaahịa, imepụta, ọrụ ndị ahịa, wdg. ọkwa ọrụ mbụ.
Jiangsu Senwei Eletrọnik Co., Ltd. na-agbaso usoro teknụzụ na-arụ ọrụ na ntanetị nke ahịa, ma na-akwanyere nkà ihe ọmụma azụmaahịa nke "njikọ, ikekọrịta, ọganihu na otu esi eme ihe". Ebumnuche anyị bụ ilekwasị anya na njikwa ike ma tụnye ụtụ na nchekwa nchekwa na mbelata mgbaze. Anyị kwudịrị ịbụ ndị na-enye ọrụ klas mbụ na njikwa ike smart. N’iburu n’uche ime ihe n’ezie ma nweta mmeri, anyị kwere nkwa ịnye ndị ahịa ahịa ngwaahịa na ọrụ dị mma. Onye ọ bụla nọ na ụlọ ọrụ anyị na-elepụta nzụlite dịka ihe mgbaru ọsọ ebighi ebi ha. Anyị ga, dịka oge niile, anyị ga-egwu egwu zuru oke nke uru teknụzụ anyị n'ihe gbasara njikwa ike na njikwa iji nyere ndị ahịa anyị aka iru ebumnuche nke ojiji ike sayensị, nchekwa ike na mbelata oriri. Site n'ime nke a, anyị ga-etinye ego aka anyị na nchekwa akụ na nchekwa gburugburu ebe obibi.